Kedu ihe bụ Realkredit? Nkọwa okwu nke ụkọ ego
Malite mgbazinye ego Wiki Realkredit
1.1 Kedu ihe a na-eme n'ezie?
1.2 Kedu ihe bụ Realkreditsplitting?
1.2.1 Ezigbo oke ugwo
1.2.2 Ihe a na-agbagha agbagha
1.3 Ònye na-enye ezigbo ego?
1.4 Ọnọdụ ndị dị aṅaa ka onye na-agbaziri ego ga-ezute?
Ụdị nke ịgbazinye ego bụ Realkredit, N'adịghị ka ịgbaziri agbazinye omenala site n'ịgba ụgwọ site na ego ego kwa ọnwa, a na-eji ụdị akwụmụgwọ a dị ka nkwa nkwekọrịta dịka nkwa. Ya mere, ọbụna ndị na-agbaziri agbazinye na enweghị ezi ego ma ọ bụ schufa na-ezighị ezi pụrụ ịbịarị ego.
Kedu ihe a na-eme n'ezie?
Dị ka a na-achị, ezigbo ndị nwe ụlọ na-etinye aka maka ihe dị adị ogologo oge ka ha wee nwee ike ịmepụta nrụpụta ma ọ bụ rụzigharị n'ụlọ ha ma ọ bụ ụlọ ha. Dị ka ezigbo ihe onwunwe ma ọ bụ nkwa, a pụrụ iji ihe onwunwe dị ka nnyefe ego ma ọ bụ ụgwọ ala. Otú ọ dị, enwere ike ịkwụ ụgwọ ego n'ezie iji mee ka ọnụọgụ ego dị ugbu a.
Onu ogugu enwere ike ka agbanwe ma obu ka edozi. Ọnụ ego a na-akwụkarị bụ 60 pasent nke uru nke ihe a kwụrụ ụgwọ. N'ihe banyere n'ezie, ị nwere ike itinye ego nke ịgbaziri agbazinye elu n'otu n'otu.
Kedu ihe bụ Realkreditsplitting?
Ekeghari nke nbanyeghachi na-adị mkpa mgbe ọ bụla ma ọ bụrụ na oke akwụmụgwọ dị n'elu karịa 60 na-emebu ma si otú a chọrọ nhazi ọkwa dị mma karị. Na omume, a na-eme ka ọdịiche dị n'etiti etiti ezigbo ego.
Ezigbo oke ugwo
Ngụkọta nke 2 Ebe E Si Nweta, ihe a na-akpọ ezigbo ala ụlọ akụ, na akwụ ụgwọ nke ndekọ ntinye aha ala ahụ kwubiri. Onu ogugu ugwo bu uzo "kewaa" iba, dika nkewa.
Ihe a na-agbagha agbagha
N'ihe banyere ụgwọ ego ịkwụghachi ụgwọ na - abụghị nke ezi ego, a na - eji akụkụ nkịtị nke nkwụnye ego 60 kwụ ụgwọ, akụkụ ego fọdụrụnụ ga - akwụ ụgwọ site na ego nkịtị onye mbinye ego nwetara. N'ihe banyere ịgbazinye ego a, a na-emecha ọnọdụ niile site na nkwekọrịta akwụmụgwọ.
Iji nweta ezigbo ego, onye gbaziri ego ga-agbanye n'aka ụlọ ọrụ akwụmụgwọ ụfọdụ, ebe ọ bụghị na ego ego ọ bụla na-akwụ ụgwọ n'ezie.
Ònye na-enye ezigbo ego?
Ọ bụrụ na ịchọrọ idekọ ego dị adị n'ezie, ị ga-achọpụta na ọ bụghị ụlọ akụ ọ bụla na-enye ọkwa a. Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ re-akwụ ụgwọ pụrụ iche, ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịnweta onyinye a pụrụ iche.
Ndị a na-agụnye ụlọ akụ na nchekwa, ụlọ akụ na-akwado, ụlọ ndị na-ewu ụlọ na ụlọ ahịa azụmahịa. Tupu ịmechaa mbinye ego ahụ, a ga-agwa gị banyere ọnọdụ dị iche iche. Nke a nwere ike ịzọpụta gị ego.
Ọnọdụ ndị dị aṅaa ka onye na-agbaziri ego ga-ezute?
Iji nweta ego akwụmụgwọ site n'aka akụnụba, ihe ụfọdụ dị mkpa ga-emezu:
- Ụlọ ọrụ akwụmụgwọ ga-enwerịrị ikikere iji nwee ike ịnye ego mgbazinye ego, ya bụ, ezigbo ego nke ụlọ.
- A ghaghị nyocha uru nke ihe onwunwe ahụ site n'aka ndị ọkachamara nwere onwe ha site na ịdekọ ma nyochaa uru ahịa ahịa ugbu a na uru ahịa a chọrọ nnochianya uru mere.
- A ga-enyocha uru ahịa nke ihe onwunwe na oge niile n'oge okwu nke mgbazinye ego ahụ. Ndị omekome ahụ kwupụtara na ọ bụrụ na a na-akwụ ụgwọ ego nkeonwe na nzuzo, a ghaghị ime nlele ahụ ruo ọkara afọ atọ, n'ihe gbasara ego mgbazinye ego, ọbụna n'ime ọnwa 12.
- Onye na-agbaziri agbaziri aghaghị ịnyawo ihe onwunwe ya dị oke elu maka mmebi nke ụlọ mkpuchi ụlọ pụrụ iche.
- Onye na-agbazinye ego ga-enwe ike ịkwado uru bara uru n'ụzọ iwu kwadoro na ọnọdụ mberede.
Realkredit nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji gbazite ego ruo ogologo oge na-enweghị oke akwụmụgwọ zuru oke ma ọ bụ ego zuru ezu ọnwa. Ndabere bụ na ụdị akwụmụgwọ a bụ maka ndị nwe ụlọ. Ọ bụrụ na ọnọdụ ndụ gbanwere ma ị gaghị akwụ ụgwọ ọrụ ịkwụ ụgwọ gị na oge, ị nwere ike idafu ihe onwunwe gị nye onye na-agbazinye ego. N'ihi ya, a ghaghị ịtụle ngwugwu nke Realkredit.
Rating: 4.0/ 5. Site na votu 1.
Isiokwu bu nke andoputa mortgage